शीर्षकमा बाइबल पदहरू: अभिभावक -> जीवन
ए बुबा हो, तिमीहरूले आफ्‍ना बाल-बालिकाहरूलाई दिक्‍क नलाओ। नत्र त तिनीहरूको मन बिग्रिनेछ।
हामीलाई तह लगाएको बेला सुखभन्दा धेरै दु:ख हुन्‍छ। तर यसले हामी तह लाग्‍नेहरूलाई परमेश्‍वरको अघि ठीक राख्‍दछ र शान्‍त स्‍वभावको बनाउँछ।
छोरोलाई अनुशासनमा नराख्‍नेले उसलाई प्रेम गर्दैन। छोरोलाई प्रेम गर्नेले उसको सुधार गर्छ।
सुधारको हप्‍काइ र अनुशासनले केटा-केटीहरूलाई बुद्धि दिन्‍छ। छाडा छोडेको छोराले आफ्‍नी आमालाई लाजमा पार्छ।
आफ्‍नो छोरालाई अनुशासनमा राख र त्‍यसले तिमीलाई शान्‍ति दिन्‍छ र तिम्रो मनमा आनन्‍द ल्‍याउँछ।
 परमप्रभुको अनन्‍त प्रेम र कृपा सदा रहिरहन्‍छ; प्रत्‍येक बिहानी ती ताजा रहन्‍छन्; तपाईंको विश्‍वस्‍तता महान् छ।
 पहिले परमेश्‍वरको राज्‍यको खोजी गर र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर अनि उहाँले यी सबै कुरा तिमीहरूलाई थपिदिनुहुनेछ। भोलिको चिन्‍ता नगर। भोलिको समस्‍या भोलि नै सुल्‍झिन्‍छ। आजलाई आजकै दु:ख पुग्‍दो छ।”
 ए मेरो छोरो, तेरा आमा-बुबाले भनेका कुरा ध्‍यान दिएर सुन् किनभने ती कुराले तेरा चालचलन त्‍यसरी नै असल बनाउनेछ, जसरी सुन्‍दर फेटा वा गलाको हारले तँ सुहाउँदो देखिन्‍छस्।
 तब पत्रुसले भने, “तपाईंहरू सबैले आ-आफ्‍ना पापलाई मानिलिएर छोड्‍नुहोस् र पाप क्षमाको लागि येशू ख्रीष्‍टको नाउँमा बप्‍तिस्‍मा लिनुहोस् र तपाईंहरूले परमेश्‍वरको वरदान पवित्र आत्‍मालाई पाउनुहुनेछ। यो प्रतिज्ञाचाहिँ तपाईं र तपाईंहरूका छोरा-छोरीको लागि र टाढा-टाढामा रहेका सबैको लागि हो, जस-जसलाई उहाँले बोलाउनुहुन्‍छ।”
२ तिमोथी ३:१४-१६
 तर तिमीचाहिँ आफूले शिक्षा पाएर विश्‍वास गरेका सत्‍यमा लागिराख। कस-कसबाट तिमीलाई शिक्षा मिल्‍यो, यो तिमीलाई थाहै छ। तिमीले सानैदेखि पवित्र धर्मशास्‍त्रका कुराहरू जानेका छौ। यिनै कुराले ख्रीष्‍ट येशूमा विश्‍वास गर्दा मिल्‍ने मुक्तिबारे बुझ्‍ने ज्ञान दिन्‍छ। परमेश्‍वरको प्रेरणाबाट मिलेको पूरै धर्मशास्‍त्र शिक्षा दिनलाई, सच्‍याउनलाई र राम्रो जीवनको तालिम दिनलाई धेरै कामलाग्‍दो छ,
 आज मैले तिमीहरूलाई दिएका यी आज्ञाहरू कहिल्‍यै नभुल। ती तिम्रा छोरा-छोरीहरूलाई सिकाओ। तिमीहरू घरमा छँदा वा बाहिर टाढा जाँदा, बस्‍दा वा काम गर्दा तिनको घरीघरी चर्चा गर। तिनलाई आफ्‍ना पाखुरामा बाँध। सम्‍झनाको लागि तिनलाई आफ्‍ना निधारमा लगाओ। तिनलाई आफ्‍ना घरका ढोकाका चौकोसमा र मूल-ढोकाहरूमा लेख।
 बालकहरू हो, आफ्‍ना आमा-बुबाले भनेको मान, यो परमेश्‍वरलाई मनपर्ने कुरो हो। आफ्‍ना आमा-बुबाको आदर गर्नू भन्‍ने धार्मिक आज्ञामा मात्र यस्‍तो प्रतिज्ञा पनि छ: त्‍यसो हुँदा तिमीहरूको भलाइ हुनेछ र पृथ्‍वीमा धेरै दिन बाँच्‍नेछौ। बुबाहरूले चाहिँ छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाओ तर तिनीहरूलाई प्रभुको शिक्षा र तालिम दिएर हुर्काओ।
 यहोशूले त्‍यहाँ यर्दनबाट ल्‍याएका बाह्र वटा ढुङ्गाहरू खडा गरे। उनले इस्राएलका मानिसहरूलाई भने, “आउँदा दिनमा यी ढुङ्गाको अर्थ के हो भनी जब तिम्रा छोरा-छोरीहरूले सोध्‍नेछन् तब इस्राएलीहरूले ओबानो भूमिमाथि यर्दन पार गरेका कुरा तिनीहरूलाई भन्‍नू। हाम्रा लागि लाल-समुद्र सुकाइदिनुभएझैँ यर्दन नदीको पानी पनि त्‍यो हामीले पार नगरेसम्‍म परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरले सुकाइदिनुभएको थियो भनी तिनीहरूलाई भन्‍नू। यसले गर्दा परमप्रभुको शक्ति कति महान् छ भनी पृथ्‍वीका हरेक मानिसले जान्‍नेछ र सदासर्वदा तिमीहरूले परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरलाई आदर गर्नेछौ।”
 बुबाले नै तह लाउन खोजेका हुन् भन्‍ने सम्‍झेर तिमीहरू दु:ख सहने गर। परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई आफ्‍नै छोरा-छोरीलाई झैँ व्‍यवहार गर्नुहुन्‍छ भनेर तिमीहरूले सहनुपरेको दु:खले देखाउँछ। उहाँले तिमीहरूलाई आफ्‍ना छोरा-छोरीलाई झैँ तह लाउनुभएको छैन भने तिमीहरू उहाँका छोरा-छोरी होइनौ, अर्काका छोरा-छोरी हौ। हाम्रा बुबाहरूले हामीलाई तह लाए र यसका लागि हामी उहाँहरूलाई आदर गर्छौं। हामीहरूका आत्‍मिक पिता परमेश्‍वरको अधीनमा झन् कति धेरै बस्‍नुपर्छ। हाम्रा बुबाहरूले उनीहरूलाई ठीक लागेअनुसार हामीहरूलाई थोरै समयको लागि तह लाउँछन्, तर परमेश्‍वर पिताले सधैँभरिका लागि हाम्रो भलाइ होस् अनि उहाँजस्‍तै पवित्र हुन सकौं भनेर नै हामीलाई तह लाउनुहुन्‍छ। हामीलाई तह लगाएको बेला सुखभन्दा धेरै दु:ख हुन्‍छ। तर यसले हामी तह लाग्‍नेहरूलाई परमेश्‍वरको अघि ठीक राख्‍दछ र शान्‍त स्‍वभावको बनाउँछ।
 हे मेरा मानिसहरू हो! मेरो शिक्षा सुन, मेरा कुरामा ध्‍यान देओ। म बुद्धिका कुराहरू भनेर बितेका रहस्‍यहरूका भेद खोलिदिनेछु। हामीले सुनेका र जानेका कुराहरू हाम्रा पुर्खाहरूले भनेका कुराहरू बुझाउनेछु। ती कुराहरू हामी आफ्‍ना छोरा-छोरीहरूबाट लुकाउनेछैनौं, आउँदा पिँढीलाई ती कुरा भन्‍नेछौं। परमप्रभुका शक्ति र महान् कार्यहरू, उहाँका उदेकका कामबारे भन्‍नेछौं। उहाँले इस्राएलीहरूलाई व्‍यवस्‍था दिनुभयो र याकूबका सन्‍तानलाई व्‍यवस्‍था-विधि दिनुभयो। आफ्‍ना छोरा-छोरीहरूलाई उहाँका नियमहरू सिकाउन उहाँले हाम्रा पिता-पुर्खालाई शिक्षा दिनुभयो। त्‍यसरी आउँदो पुस्‍ताले तिनका बारेमा सिक्‍न सकून् र आफ्‍ना सन्‍तानलाई पनि ती सिकाउन सकून्! यसरी तिनीहरूले परमेश्‍वरमाथि भरोसा राख्‍नेछन् र उहाँका कामहरू भुल्‍नेछैनन् र सधैँ उहाँका आज्ञाहरू मान्‍नेछन्।
 बुढा मानिसलाई शान्‍त, गम्‍भीर अनि विश्‍वासी, प्रेम र सहने शक्तिमा पाको हुनुपर्छ भनेर शिक्षा देओ। त्‍यसरी नै बुढी भएका स्‍वास्‍नी-मान्‍छेहरूले भक्तिको जीवन चुनून्। तिनीहरूले अर्कालाई बिनासित्तीको दोष नलगाऊन्। तिनीहरू रक्‍सीको वशमा नपरून् र राम्रा कुराहरूको शिक्षा देऊन्। त्‍यसो भए तिनीहरूले तरुनी स्‍वास्‍नी-मान्‍छेहरूलाई आफ्‍ना लोग्‍ने र छोरा-छोरीलाई माया गर्न तालिम दिन सक्‍नेछन्। अनि उनीहरूले तिनीहरूलाई आफैंलाई वशमा राख्‍ने, पवित्र मन भएका, दयालु, असल घरजाम गर्ने र लोग्‍नेको अधीनमा रहने शिक्षा दिनेछन्। त्‍यस्‍तै भयो भने परमेश्‍वरको शिक्षाको बदनाम हुन पाउनेछैन। त्‍यसरी नै तन्‍नेरीहरूलाई पनि आफैंलाई वशमा राख्‍ने शिक्षा देओ। तिमीले नै सबै कुरामा असल कामको नमुना भएर तिनीहरूलाई देखाऊ। शिक्षा दिंदा साँचो र गहिरो, कसैले काट्‍न नसक्‍ने पक्‍का शिक्षाहरू देओ। त्‍यसो भए शत्रुहरू पनि केही भन्‍न नसकेर आफैं लाजमा पर्नेछन्।
 ए मेरो छोरो, मैले दिएको शिक्षालाई नभुल, मैले भनेका कुरा गर्न सदा याद राख् किनभने मेरो शिक्षाले तँलाई लामो आयु दिनेछ र तेरो फलिफाप गराउनेछ। भक्ति र विश्‍वासलाई कहिल्‍यै नत्‍याग्। ती तेरो घाँटीमा बाँधिराख्, हृदयमा लेखिराख्। त्‍यसो गरिस् भने परमेश्‍वर र मानिस दुवै तँसित प्रसन्‍न रहनेछन् र तैँले निगाह पाउनेछस्। तेरो सारा हृदयले परमप्रभुमा भरोसा गर्‌, म जान्‍दछु भन्‍ने तेरो विचारमा निर्भर नहो। आफ्‍ना सबै काममा परमप्रभुलाई सम्‍झी र उहाँले तँलाई ठीक मार्ग देखाएइदिनुहुनेछ। आफूलाई ज्‍यादै बुद्धिमान् नठान्, खालि परमप्रभुको आज्ञा मान् र दुष्‍ट्याइँबाट जोगिने गर्‌। त्‍यसो गरिस् भने त्‍यो तेरो चोट निको पार्ने र घाउको दु:खाइ कम गर्ने असल ओखतीझैँ हुनेछ। आफ्‍नो धन-सम्‍पत्ति र आफ्‍ना उब्‍जनीको सबैभन्दा पहिलो फल चढाएर परमप्रभुको आदर गर्‌। त्‍यसो गरिस् भने तेरा ढुकुटीहरू अन्‍नले भरिनेछन् र तेरो दाख-कुण्‍ड दाखमद्यले भरिएर पोखिनेछ। ए मेरो छोरो, परमप्रभुले तँलाई सुधार्नुहुँदा ध्‍यान दे र त्‍यसलाई विरक्त नमान् किनभने जसरी बुबाले जुन छोरोमा गर्व गर्छ, उसैलाई दण्‍ड दिन्‍छ, त्‍यसरी नै परमप्रभुले जसलाई प्रेम गर्नुहुन्‍छ, उसैलाई सुधार्नुहुन्‍छ।